Home Wararka Deg-Deg: Kulankii maanta ee Beesha Caalamka oo go’aano culus ka soo baxeen
Deg-Deg: Kulankii maanta ee Beesha Caalamka oo go’aano culus ka soo baxeen
Kulan deg deg ah oo ay maanta isugu yimaadeen beesha caalamka kana dhacay xarunta Xalane ayaa looga hadlay xaalada cakiran ee ka jirta dalka Soomaaliya. Qodobada looga hadlay waxaa ka mid ahaa soo guuritaanka Gudoomiyaha Baaralamaanka ee uu ka soo guuray Xaruntii Villa Soomaaliya.
Madaxa AMSIOM oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ciidankoodii joogay Villa Soomaaliya ay wali ku nagaadeen deegaankaas si loo sugo amniga madaxtooyada lakiin ay lama huraan tahay in Gudoomiye Mursal uu helo ciidan amni oo la wareega amaaankisa. Madaxdii ka soo qayb gashay shirka ayaa isku waafaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh AMISOM ula wareegto Aminga degaanka uu Gudoomiyaha u soo guuray maanta. Talabadaan ayaa waxa ay ka hor imaanaysaa codsiga Madaxweyne Farmaajo oo ah in ciidanka AMSION ayan ilaalo sinin Gudoomiye Mursal.
Dhanka kale waxa aad looga dooday go’aanada qaldan oo ay dowlada Fedaraalka qaadatay kuwaas oo sii kordhiyay xasaradda siyaasadeed ee ka jirta dalka. Beesha Caalamka oo uu hogaanka u hayso dowlada Maraykanka ayaa la go’aamiyay in ay sida ugu dhasiyaha badan leh fartiin culus u gaarsiiyaan Madaxweyne Farmaajo taas oo lagu siinayo Farmaajo waqti kooban in uu xal degdeg ah u helo xaalada ka sii daraysa ee dalka ka jirta. Hadii uu ku guuldaraysatana ay beesha caalamka si toos ah ula wareegi doonto dhexdhexaadinta labada dhinac. Hadalka maanta ka soo yeeray beesha Caalamka ayaa waxa uu abuuraya shaki ah in ay imaan karto in MW Farmaajo la mariyo jidkii la mariyay Allaha u naxariisto Madaxweyne Cabdullahi Yusuf.
Waxa ay u muuqataa in waqti cayiman la siin doono MW Farmaajo in uu ku soo afjaro qilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya baarlamaanka taas oo noqon karta kaliya in dowlad lawada leeyahay la soo dhiso. Waxaa la isla gartay in ay lama huran tahay in digniintii ugu danbeeysay la siiyo MW Farmaajo oo ah in uu joojiyo dhaq-dhaqaaqyada keeni kara in xaalada jira ka sii darto isla markaana uu ku mashquulo in uu keeno xal siyaasadeed oo degdeg ah.
Sidoo kale waxaa la isla gartay in baarlamaanku yahay hay’adda isku haysa dalka muhimna tahay in la ilaaliyo madaxbanaanideeda sidaas darteedna marna ma meel mari karo go’aano uusan hogaanka u haynin Gudoomiye Mursal oo ah Gudoomiyaha sharciga ah oo ay beesha caalamka aqoonsan tahay.
Previous articleSaudi Arabia Declares War on America’s Muslim Congresswomen
Next articleArab and African states discuss forming a Red Sea security council
Puntland oo walwal ka qabtaa Caabuqa Coronavirus
Gudoomiyhii degmada Diinsoor oo ka badbaaday Weerar ay ku qaadeen Ciidamo...